Kraft Tape Series Factory - Mpanamboatra andian-tsarimihetsika sinoa sinoa China
Ny fiorenan'ny kraft paper gummed tape dia taratasy kraft avo lenta, miaraka amin'ny fonosana tokana miaraka amin'ny famotsorana na tsy fanaronana mivantana caulking sy fitsaboana anti-sticking, ary ny lamosina dia rakotra adhesive mafana miempo.
Rakitra kraft nampandeha rano
Ny kasety taratasy vita amin'ny kraft vita amin'ny rano dia vita amin'ny akora fototra vita amin'ny taratasy kraft ary nopetahany dity. Miraikitra aorian'ny rano mandalo. Izy io dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy mandoto. Izy io dia azo alaina tahiry voaverina sy voaverina. Mba hiantohana ny fametahana maharitra tsy misy hamandoana.
Adhesion kraft taratasy vita amin'ny kofehin-tsofina avoakan'ny fonosana
Namboarina tamin'ny rano nohamafisin'ny rano ny kasety kraft niaraka tamin'ny dispenser
Fiarovana ny tontolo iainana sy kasety taratasy Kraft azo ampiharina
Ny kasety taratasy Kraft dia voasokajy ao anaty kasety taratasy Kraft tsy misy rano, kasety taratasy Kraft mahazaka hafanana ambony, kasety taratasy Kraft rano, kasety taratasy Kraft fotsy, kasety taratasy Kraft misy sosona sns
Ny kasety Cowhide adhesive tsy misy rano dia manana ny toetran'ny firaiketam-po voalohany, ny tanjaka avo lenta ,, tsy misy ady, fanoherana ny toetr'andro milamina, tsy misy fandotoana, azo averina, vokatra maitso mety.
Tape taratasy vita amin'ny rano mando
Ny kasety taratasy kraft amin'ny rano mando dia vita amin'ny taratasy kraft ho toy ny fotony ary avy eo novaina ny starch ho toy ny adhesive. Tsy maintsy lena izy alohan'ny hamokarana toetra adhesive. Azo soratana amin'ny taratasy kraft. Ny indostria dia antsoina matetika hoe fametahana taratasy kraft mando indray. Tapezo matevina aorian'ny mando, manana ny mampiavaka ny firaiketam-po mahery voalohany izy, ny hery matanjaka mahery ary ny fanoherana ny mari-pana. Ny substrate sy ny adhesive-ny dia tsy handoto ny tontolo iainana, ary azo averina ampiasaina ary ampiasaina indray amin'ny fonosana.